ဘဝမှတ်တိုင်: နည်းပညာစာအုပ်များစုစည်းမှု. ( ၁ )
နည်းပညာစာအုပ်များစုစည်းမှု. ( ၁ )
လေးတွေကိုပြန်ရှာလို.တွေ.သလောက်စုစည်းပီးတစ်ခါထဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော.နဲနဲများတော.ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ.အချိန်မှဒေါင်းလို.အဆင်ပြေမှာပါ.. ကျွန်တော်.ဆိုဒ်မှာအရင်တင်ပေးထားပီးသားစာအုပ်တွေလဲပါချင်ပါခဲ.ပါလိမ်.မယ်.. အဲဒီအတွက်ဆောရီးပါ.. နည်းပညာစာအုပ်တွေတစ်စုတစ်စည်းထဲသိမ်းချင်တဲ.သူတွေအတွက်တော.အဆင်ပြေပါလိမ်.မယ်.. စုစုပေါင်းစာအုပ် ( ၅၀ )ပါဝင်ပါတယ်... ဖိုင်ဆိုဒ် 290 MB ရှိပါတယ်.. တစ်အုပ်ချင်းတင်ရမှာပျင်းလို.တစ်ခါထဲပဲတင်ပေးလိုက်တာပါ..ဟီး. ဒေါင်းဖို.ကွန်နက်ရှင်အခြေအနေကြောင်.အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလဲ ဒီလင်.လေးကိုမှတ်ထားပီးနောက်ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ.အချိန်မှသာဒေါင်းကြပေတော.ဗျာ.. တင်ပီးမှသေချာပြန်ကြည်.မိပါတယ်.. နည်းပညာနဲ.မဆိုင်တဲ.စာအုပ်တစ်အုပ်နှစ်အုပ်ပါသွားတဲ.အတွက်ဆောရီးပါ.. မူရင်းစာအုပ်ရေးသားသူများတဲ.ဆရာများအားလုံးကိုလဲဒီနေရာကနေပဲ
Fruity Loop Studio 10 နဲ.သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် (၀င်းဟိန်း)
Basic Application ရေးသားဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားများ(၀င်းဟိန်း)
Bat File Programming (Zin Ko Oo / rapperlay444@gmail.com)
Cracker Guide 2.2 ( rhythm / Myanmar Cracking Team)
How To Create New Partition On External HDD ( မောင်နိုင် / www.lovercreater.com)
Learning Nero 8 ( U Aung Lin )
Loic DDOS Tools ကိုအသုံးပြုနည်း ( 3thic0kiddi3 / 3thic0kiddi3@gmail.com )
Adobe Photo Shop Cs5 ( ရဲရှင်း )
ဟက္ကာလက်စွဲ ( Khit100@gmail.com )
Twitter အသုံးပြုနည်း (ကလျှာအိအိလွင် )
Wifi Hacking Basic ( 3thic0kiddi3 / 3thic0kiddi3@gmail.com )
Guitar Chord:a Beginner's Guide (Darrin Koltow / www.MaximumMusician.com )
Android User Guide ( Chateau Man )
အခြေခံဒရမ်တီးနည်း ( ထက်မိုး )
Cafe Zee အသုံးပြုနည်း
အိမ်သုံး Proxy Server(သို့မဟုတ်)CCProxy အသုံးပြုနည်း (ရာမညဖိုးလပြည်./www.phoelapyae.com)
Complete Network Guide ( Zaw Lin / Youth )
Corel DRAW X4 အသုံးပြုနည်း ( U Aung Myint )
Swishmax နဲ.သီချင်းများဖန်တီးခြင်း သူရအောင်(မိုးသောက်ပန်း)
How To Create USB Bootable ( www.moepcservice.blogspot.com )
How to hack Facebook account ? ( http://myanmarpyiyouth.blogspot.com/ )
How To Make Money From Internet Beta Version (www.mmithelper.com )
How To Use Konboot Software
How To Create Android Application ( htarhtarlwin.blogspot.com )
How To Install Myanmar Font On Ubuntu 910 ( thebox02@gmail.com )
( http://www.worldwidemyanmar.com )
Introduction to Computer Science (ကွန်ပြူတာသိပ္ပံမိတ်ဆက်)
joomla website အတွက်အခြေခံပြင်ဆင်မှု.များ & google app နှင်. domain name ချိတ်ဆက်ခြင်း( Moe Myint Shein)
joomla အခမဲ.၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရေးတင်နည်း ( ကောင်းမြတ်ထွဋ် / တင်ဦး )
Keylogger Creation With Notepad (www.minsoeyarsar.com)
အဆင်.မြင်.လိဒ်ဂစ်တာတီးခတ်နည်း ( ခိုင်ကျော် )
Mouse Effect ထည်.နည်း ( www.mmflashsongs.ning.com )
Myanmar Font For Android Without Rooting နေမင်းမောင် (https:www.nayminmaung.info)
How To Use Paint Program On Window
Router ကို Setting ချပြီး WiFi ပြန်လွှင့်နည်း( http://www.pyayblogger.com )
Wifi မှန်သမျှလွယ်လွယ်ဟက်မယ် ( အိုင်တီမုဆိုး )
Window7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ ( U Aung Lin )
Wnidow7Installation Guide ( KznT )
Window 8 အသုံးပြုနည်း သရ ( ITC )
Wordpress Installation Guide ( လရိပ် )
Xss Hacking ( r00tcreat0r )
ကွန်ပြူတာဖြင်.အဆောက်အဦးပုံစံရေးစွဲနည်း ( U Aung Lin )
ကီးဘုတ်တီးနည်း ဦးတင်အေး ( ထားဝယ် )
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/05/2013 05:32:00 am